SomaliTalk.com » 2009 » August » 11
Home » Archive Maalinta August 11th, 2009
11-da Agoosto Maalin xasuus ma hadho ku ah Bahadda Saxaafadda Soomaaliyeed.
11-da Agoosto Maalin xasuus ma hadho ku ah Bahadda Saxaafadda Soomaaliyeed. Hotel Amiira ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay xaflad baroordiiq ah oo loo sameynayey agaasimhii Idaacadda Horn Afrik Cali Iimaan Sharmaake iyo Agaasimihii Idaacadda Capital Voice Mahad Axmed Cilmi oo iyagu la dilay 11-kii Agoosto 2007, waxaana xafladdaan ka soo qaybgalay mas’uuliyiin ka socotay Dowladda Federaalka,...
Why I fear for Somalia|Nuradin
The wave of radicalisation targeting young Somali children everywhere is threatening hopes for the country’s future stability Over 20 years, I have watched Somalia disintegrate politically, crumble economically and fragment socially. But my hope for Somalia’s future was always entrusted in its younger generation. Our struggle was to invest in our youth inside Somalia to develop a culture...
Pakistaaniyiin Tabliiqa oo Gaalkacayo lagu laayey
Gaalkacayo: Masaajid ku yaala magaalada Gaalkcayo ayaa saaka salaadii subax lagu dilay shan nin oo dhalashadooda lagu sheegay Paskistaaniyiin. Waxaa iyana la dhaawacay laba nin oo kale, oo dhalashadooda Somali iyo Pakistani la gu wada sheegay. Wadaadan ayaa ahaa Jamaacada Tabliiqa halkaasna u joogay faafinta dacwada, sida ay caanka ku tahay Jameecada Tabliiqa. Warar hor dhac ah oo halkaas kasoo baxaya...
The Free Bashir Makhtal Coalition
Canadian Somali congress & The Free Bashir Makhtal Coalition Would like to invite you to join Ottawa Canadian Somalis in a peaceful demonstration to demand that the Canadian Government bring Bashir Makhtal back to Canada & show our support for the Makhtal Family. When: Monday August 17, 2009 1:00 PM to 3:00 PM Where: Starting at 151 Slater Street and proceeding to the Prime Minister’s...
Sh.C/qaadir oo ku baaqay in laga qayb qaato dhamaystirka Markazka Dacwada iyo Tacliinta
Fadiilatu Sh.C/qaadir Nuur Faarax (xafidahullaah) oo ku baaqay in laga qayb qaato dhamaystirka Markazka Dacwada iyo Tacliinta ee Al-Xikma ee kawado Gaalkacayo. Sawiro kaloo dheeraad ah daawo Waxaa allaah mahadiis ah in dhismaha markazka Alxikma ee la dhagax dhigay 15/6/2009 uu marayo meel lagu farxo uuna gooyey masaafo dheer waxaana la shubay dabaqii koowaad bilawgii bishaan Ogosto een ku jiro, qaybtii...
Mahad oo dhan Ilaah baa leh Nabad iyo Naxariisina Nebigeenna Korkiisa ha ahaato. Ma maqasheen, mase aragteen Hantiilayaasha Caydha ah ee gaajada u dhintay? Haddaydaan hora u maqal waa: Soomaalida dadka la yiraahdo!!!! Adduunka Socodkiisu waa cibro iyo casharo waaweyn. Soomaaliduna horay ayey u tiri: “Nimaan Dhul Marin Dhaaya Ma leh”. Adduunka intaan socdaalka ku ahay waxaan wax badan u...